Ngathi | Sichuan Mingtaishun Cemented khabhayithi Co., Ltd.
I-Sichuan Mingtaishun CNC Cutting Tools Co., Ltd. Ngaba yinkxaso-mali ka-Sichuan Mingtaishun Carbide Co., Ltd., ekuthiwa yi "MTS", ngumnikezeli wenkonzo ohamba phambili jikelele kwizisombululo zokusika i-carbide yokugaya, izixhobo ezimiyo , iinkqubo zokwenza imingxunya kunye nezixhobo kuyilo kuyilo emva kokuthengisa, ngolwaneliseko lwabathengi oluhle.
I-MTS yi-ISO9001: 2008 kunye ne-ISO14001 eqinisekisiweyo yokuqinisekisa impilo kunye nokhuseleko, kunye nokugcina inkonzo kubathengi bethu kwihlabathi liphela. Sithatha uthotho lwezikhuselo ukukhusela oogxa bethu, abathengi, kunye namaqabane eshishini.
I-MTS izinze kwiphondo laseSichuan, China, kwaye isebenza kwikomkhulu elinye kunye neenkampani ezixhasayo ezi-4, kunye neeofisi zokuthengisa ezisixhenxe kwihlabathi liphela. Malunga neminyaka eli-10 yamava kuPhando lweCarbide noPhuhliso. I-MTS ngoku kukuthenga okuphezulu kwezobuchwephesha kubathengi ukhetho olubanzi lwezinto zeekhathalogu kunye nokukwazi ukuyila kunye nokuvelisa ukusingatha iimfuno ezingaqhelekanga zokuchwetheza kwabathengi, kukhonza amazwe angama-60.
Xa ukhetha i-MTS, usebenza nabantu abenza izinto ezilungileyo omnye nomnye kunye nabathengi bethu. Siyakholelwa ekusebenziseni amandla obudlelane obomeleleyo, obuboshwe kukuzithemba esikuzuzileyo, ukuhambisa izisombululo zokusika intsimbi kunye namava enkonzo abalaseleyo kwimpumelelo yakho.
Abathengi bahlala bemkelekile ngokufudumeleyo ukuba batyelele inkampani yethu kuphando lwendawo yomsebenzi.
Support Inkxaso yomgaqo-nkqubo: Umgaqo-nkqubo wesizwe weprojekthi yenkxaso, icandelo lelungu le-China Tungsten Industry Association. Nandipha ulwazi kushishino lokuqala kunye nezixhobo, kunye nethemba elibanzi lophuhliso.
♦ Izibonelelo zeshishini:Izixhobo zemisebenzi emininzi edityanisiweyo, izixhobo ezikhawulezayo kunye nezifanelekileyo ziya kuba yinto ephambili kuphuhliso lwezixhobo. Ejongane nenani elandayo lezinto ekunzima ukuzenza kumatshini, ishishini lezixhobo kufuneka liphucule izixhobo zesixhobo, liphuhlise izixhobo zesixhobo esitsha kunye nolwakhiwo lwezixhobo ezifanelekileyo. Izinto zekhabhayithi eziqinisiweyo kunye nokusetyenziswa kwenkqubo yokutyabeka kuyanda.
♦ Amandla Inkampani: Sineefektri ezi-4, iinkxaso-mali ezi-5 kunye namaziko athengisa ama-7, agubungela iChina iphela.
♦ Ithuba leetalente:Sinabasebenzi abamalunga nama-500, kubandakanywa amaqela angama-80 e-R & D, kunye neqela lokuthengisa kunye neenkonzo zabantu abangaphezu kwama-200. Ukuseka ubuhlakani bobuchule kunye neeyunivesithi eziphambili zase China ezinje ngeYunivesithi yaseSichuan kunye neDyunivesithi yezeNzululwazi neTekhnoloji.
♦ Izibonelelo zeMveliso:Kukhetho lwezixhobo, iZK30UF isetyenziselwa iidigri ezingama-55, iJinlu GU25UF isetyenziselwa iidigri ezingama-65, kwaye iZigong YG10X isetyenziswa njengeprototype yeedigri ezingama-45. Iingcali ekhaya nakumazwe aphesheya ziqeshelwe ukulawula yonke imiba yeemveliso zenkampani ukusuka ekubetheleni ukuya kusintering, ukuze ukungaguquguquki kunye nokuzinza kwemivalo kugcinwe kwaye umgangatho wemveliso uphuculwe kakhulu.
♦ Izibonelelo zentengiso:Sinentambo epheleleyo yezamashishini, amaxabiso afanelekileyo, ukubonelelwa kwangexesha, kwaye abasebenzisi banokujongana nokutshintshiselana ngamava kunye nabenzi bezixhobo ukuze baxoxe ngokudideka kunye nezisombululo ekuhlangatyezwane nazo ekusebenziseni izixhobo zokusika. Kwaye wenze izixhobo ezahlukeneyo ezingekho semgangathweni ukusuka kwimveliso yebha kuyilo lwesixhobo ngokweemfuno zabathengi.
♦ Izibonelelo zolawulo: Sazise i-ISO9001 (inguqulelo ka-2008) / i-ISO9001 (uguqulelo lowama-2015) / ISO14001 (uguqulelo lowama-2004) / ISO14001 (uguqulelo luka-2015) inkqubo yolawulo, idityaniswe nemveliso yokwenyani, kwaye iphumelele iziphumo zokuqala.
♦ Isikhundla somthamo:Sineefektri ezi-4 kunye nezixhobo zokuvelisa zasekhaya nakwamanye amazwe ezingama-250, ezinokuthi zihlangabezane neemfuno zemveliso ukusuka kunikezelo lwempahla eluhlaza ukuya kwimveliso egqityiweyo ye-R & D kwimveliso yezixhobo. Unikezelo lonyaka lwezigidi ezintlanu zeemveliso zekhabhayithi eziqinisiweyo.
♦ Uluhlu lwezibonelelo:Sinee-10 ezinkulu zokugcina iimpahla ezihamba kunye ne-inventri yonyaka ye-2-3 yezigidi. Iimveliso zoluhlu lweempahla zinokuhlangabezana neipesenti ezingama-85 zeemfuno zentengiso, kwaye lonke uluhlu lwasekhaya lunokudluliselwa kwiintsuku ezi-3.